बीपीले सबैभन्दा पहिला राष्ट्रलाई महत्त्व दिन्थे। त्यसपछि प्रजातन्त्र र जनतालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए। उनको राजनीति सदैव प्रजातन्त्रका लागि रह्यो। बीपीले मलाई चाहिन्छ र मैले पाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट राजनीति गरेको कहिल्यै देखिएन।
राजनीतिक ‘स्पेस’ खोज्दै विप्लव, यस्ता छन् नेताहरूसँग भेटवार्ता बढाउनुका तीन कारण
‘सरकारले हामीसँग गरेको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो। सोही सहमतिबमोजिम कार्यकर्ता छुटाउन भेटवार्ता तीव्र पारेका हौं।’
'ओलीको मतियार' ठाकुर समूहले एकाएक देउवालाई किन दियो साथ?
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को ठाकुर समूहले अनपेक्षित रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर फेरि आफ्नो अवसरवादी चरित्र प्रदर्शन गरेको छ।
माधव नेपाल पक्षको साथबिनै देउवालाई पुग्छ बहुमत, यस्तो छ अंकगणित
जनता समाजवादी पार्टी (जसपां) नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले पनि विश्वासको मत दिने भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाउने पक्का भएको छ।
प्रहरीको विशेष निगरानीमा रहेका स्वघोषित 'सामाजिक अभियन्ता'को यस्तो छ नालीबेली
प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘राज्यका संयन्त्रलाई लत्याएर मैले नै कारबाही गर्ने हो जसरी दम्भ देखाएर हिँड्ने र युटुबरलाई प्रयोग गरेर दुनियाँलाई गाली गर्नेलाई हामी छाड्दैनौं।’
मेलम्चीका मेयर भन्छन्- बर्बादीको कारण हामी नै हौं
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार बाढीका कारण खण्डहरमा परिणत भएको छ।
मेलम्ची बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १० पुग्यो, १३ जना बेपत्ता
मेलम्ची नदीमा आएको बाढीमा थप तीन जनाको शव भेटिएको छ।
स्थलगत : 'ऋण गरेर बनाइएका सय बढी घर सोत्तर भए, अब कहाँ जाने? के गर्ने?'
मंगलबार राति आएको बाढीले मच्चाएको वितण्डाका कारण क्षणभरमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चिस्थित नयाँ बजार बगरमा परिणत भयो। लाखौं खर्च गरेर बनाएका घर बालुवामा मिसिए। करिब एक सय भन्दा धेरै घर बस्नै नहुने गरी बाढीले क्षतविक्षत बनाएको छ।
८ वर्षमा ४ हजारको मृत्यु, यस्तो छ सिन्धुपाल्चोकमा विपत् शृंखला
२०७१ यता मात्रै सिन्धुपाल्चोकमा बाढी, पहिरो र भूकम्पमा परेर करिब ४ हजार जनाले ज्यान गुमाएका छन्। दसौं हजार अंगभंग भएका छन् । ठूला प्राकृतिक विपत्तिका कारण हरेक वर्ष मानवीय र भौतिक क्षति बेहोरिरहेको छ।
पैसा तिर्न नसक्दा अस्पतालमा बन्धक बने रमेश, श्रीमती भन्छिन्– गरिबलाई बिरामी हुन छुट रहेनछ!
ऋण काडेर र सहयोग मागेर मेडिसिटीमा १७ लाख र नेपालगन्जमा २ लाख खर्च गरिसकेका छन् उनीहरुले। मेडिसिटीलाई साढे ११ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी नै छ।
ओलीका मन्त्री : रातो पासपोर्ट बेच्नेदेखि प्रदेश सांसदबाट निकालिएकासम्म
कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरुपयोग गरी मानव तस्करी गरेको अभियोग लागेका, प्रदेश सांसद्बाट निकालिएका र राजनीतिमा त्यति सक्रिय नभएका व्यक्तिलाई पनि ओलीले मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
पाँच महिने मन्त्री प्रेम आलेका पाँच काण्ड, जो सधैं 'ट्रोल' बनिरहे
त्यसो त उनको नियुक्ति नै विवादित बनेको थियो। काठ व्यापारीलाई वनमन्त्री बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको थियो। व्यापारीमात्र होइन, आले काठ तस्कर नै भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
सत्तामा पुगेपछि ‘सबै थोक बिर्सने’ ईश्वर पोखरेल विवादैविवादमा पदमुक्त
पोखरेलमाथि नेपाल ट्रस्टको जग्गा अनियमिततापूर्वक भाडामा दिने निर्णय गरेको आरोप छ। कोरोनाविरुद्धको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनावश्यक चासो लिएको, सीसीएमसीको संयोजक हुँदा अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर अन्य मन्त्रालयमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको थियो।
कालिमाटीको अत्यासलाग्दो भीडमा कोरोना छैन? (फोटोफिचर)
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा उपभोक्ताको ठूलो भीड देखिएको छ। निषेश आदेशको समयमा पनि कालिमाटीका तरकारी पसल तथा अन्य पसलमा उपभोक्ताको ठूलो भीड देखिएको हो।
समिट अस्पताल जहाँ बिरामी छटपटाउँदा–छटपटाउँदै बितिजान्छन्
‘अस्पतालले अक्सिजनको जोहो गरिदिएको भए र बिरामी छटपटिएका बेला डाक्टर वा नर्स पुगेको भए काका बाँच्ने थिए। धेरै पटक काका छटपटिएको देखें, डाक्टर–नर्ससँग गुहार मागें। तर, उपचार गर्न कोही गएनन्। अनि कसरी बाँचून् त?’
विराट अस्पताल प्रकरण : आक्रमण नभएको भए डाक्टर चौधरी बच्थे!
त्यही बेला अकस्मात् डाक्टरमाथि आक्रमण भयो। स्वास्थ्यकर्मीको भागाभाग चल्यो। डा. मुकेशलाई हेर्ने कोही भएनन्। घटना भएको १० मिनेटपछि डा. मुकेशको मृत्यु भयो।
मास्कमा कालाेबजारी : साढे दुई रुपैयाँमा बन्ने मास्कलाई किन १० रुपैयाँ?
विद्यमान कानुनअनुसार विक्रेताले आफूले किनेको मूल्यभन्दा २० प्रतिशत बढीमात्रै नाफा लिन पाउँछन्। त्योभन्दा बढीमा बेचे कालोबजारी ऐन आकर्षित हुन्छ।